Robotyada jikada - midkee ayaan dooranayaa, moodellada iyo faa'iidooyinka? | Bezzia
Robotyada jikada, midkee ayaan dooranayaa?
Susana godoy | 09/06/2021 16:00 | Karinta
Waa mid ka mid ah su'aalaha aan isweydiin karno inta badan waana inay jiraan kuwo badan oo aad u kala duwan aaladaha jikada in aan suuqa ku hayno. Marka, mararka qaarkood way nagu adag tahay inaan doorano mid. Ma naqaanno waxa ay tahay inaan eegno ka hor inta aannaan bilaabin, sidaa darteed maanta waxaannu kuu caawinaynaa adiga.
Waxaan ku siin doonnaa talada ugu fiican iyo sidoo kale dhammaan macluumaadka saxda ah si xulashadaadu ay ugu habboon tahay baahiyahaaga. Sababtoo ah kuligeen iskuma nihin kuwo isku mid ah, laakiin waxaan dooneynaa inaan sameyno iibsasho wanaagsan oo waarta. Marka, waxaad ku jirtaa gacmaha ugu fiican hadana waxaan ku tusinaynaa.
1 Waa maxay aaladda ugu wanaagsan ee wax karinta?
2 Waa maxay robotka jikada ugu iibinta badan
3 Maxay yihiin faa'iidooyinka aaladaha jikada
Waa maxay aaladda ugu wanaagsan ee wax karinta?
Shaki la'aan waxaa jira noocyo badan iyo moodooyin badan oo aad suuqa ku haysato. Laakiin dhammaantood, waa inaad had iyo jeer ka fekertaa tallaabooyin taxane ah ka hor intaadan iibsan. Sababtoo ah waa run inay faa'iidooyin badan leeyihiin laakiin kuwan waa inay la jaan qaadaan nolosheena.
Awoodda mashiinnada jikadayadu waa mid ka mid ah qodobbada aasaasiga ah. Sababtoo ah waxaan ku qiimeyn doonnaa tan sida ku cad dadka wax cunaya ee aan nahay. Haddii aad caadi ahaan tahay afar qof oo wax cunaya, isku mid kuma noqonayso guriga ay laba nool yihiin ama mid keliya ayaa nool. Sidaa darteed, waxaad leedahay laba nooc oo liitar ah iyo sidoo kale 5 litir.
Awooddu waa mid kale oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah. Sababtoo ah awoodda badan waxay la mid tahay xoog badan iyo inay sii socon doonto muddo dheer iyo natiijooyin wanaagsan. Qaarkood waxay leeyihiin 500W oo awood ah, halka kuwa kale ay ka sarreeyaan 1000W illaa iyo hadda.
Hawlaha ay leedahay waa mid ka mid ah fikradaha in la eego. Sababtoo ah qaar waxay leeyihiin ilaa 12 shaqooyin halka kuwa kalena ay ka weyn yihiin 8. Waxa ugu fiican ayaa ah in la ogaado kuwa ay keensato oo laga fikiro haddii ay la imaan doonaan iyaga oo kuxiran suxuunta aad inta badan diyaariso. Moodooyinka ugu aasaasiga ah horeyba waxay u leeyihiin howlaha muhiimka ah iyo kuwa lagama maarmaanka ah.
Hawlaha badan ee ay haystaan, qalab badan ayay sidoo kale bixin doonaan si ay ugu fududaato.
Waa inaad hubisaa in qaybaha iyo qalabku ay fududahay in la nadiifiyo ama ay aadi karaan weelka dhaqa., markasta waqtiga ilaaliya.
Waa maxay robotka jikada ugu iibinta badan
Hadaad isweydiiso keebaa rootika jikada ugufiican, mid kali kumaagama jawaabi karno maxaa yeelay waxaa jira dhowr dariiqooyin tilmaamaya Laakiin waxaa jira qaar iyagu iska dhigay inay yihiin aaladaha ugu iibinta badan Amazon.
Meesha ugu horeysa waxay tagtaa aaladda 'Robot Cecotec Mambo' Waxay leedahay 30 shaqooyin, 3,3 liitar oo karti ah, iyo sidoo kale buug cunto karin ah waana weel dhaqe badbaado leh. Haddii aad u baahan tahay caawiye wanaagsan, fadlan si xor ah u soo iibso Halkan.
Dabcan haddii aad weli rabto inaad keydiso lacag yar laakiin waxay leeyihiin ikhtiyaarro waaweyn dhinacaaga, waxaa jira qaabkan aad arki karto Halkan iyo kan kale oo la iibinayo Halkan isku mid. Midka koowaad ee leh 900W iyo howlaha ugu muhiimsan, halka kan labaad, uu leeyahay 8 menus horay loo sii qorsheeyay iyo 5 litir oo awood ah.
La sumadda Moulinex Waxay sidoo kale leedahay dhowr moodel oo ah aalado jikada oo iyagu iska dhex dhigay kuwa ugu iibka fiican. Midkood waa midka leh 3,6 litir oo awood ah, iyo sidoo kale buug cunto karin ah iyo 5 barnaamijyo otomaatig ah oo aan helnay. Halkan.
Maxay yihiin faa'iidooyinka aaladaha jikada
Waxaan horay u aragnay waxa ay tahay inaan eegno markaan iibsaneyno, iyo sidoo kale qaar ka mid ah moodooyinka ugu iibinta wanaagsan. Hagaag, anigoo og waxaas oo dhan, waa inaan kaliya diirada saarnaa faa'iidooyinka.
Waqti ayey nooga badbaadiyaan jikada, maaddaama ay barnaamij yihiin oo ay qaban doonaan dhammaan shaqooyinka iyada oo aan loo baahnayn in la sugo.
Heerkulka iyo waqtiga labadaba waa la nidaamiyaa taas oo u dhiganta natiijo wanaagsan.
Waxay leeyihiin buugaag cuntada lagu karsado oo naga caawiya inaan u diyaarinno suxuunta siyaabo kala duwan.
Marka la dhammeeyo, wax badan oo aad nadiifiso ma lahaan doontid jikadaada ayaa ka sii fiicnaan doonta had iyo jeer.
Waxay yihiin kuwo awood badan oo sii kordhaya is haysta si aysan boosas badan u qaadan.
Xaqiiqdii intaas oo dhan ka dib, waxaad siin doontaa go-go 'si ay ugu dhexgalaan maalin-maalmeedkaaga! Mashiinada jikada ayaa kaa caawin doona waqti kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Karinta » Robotyada jikada, midkee ayaan dooranayaa?
Massimo Dutti wuxuu soo bandhigayaa guriga daabacaada cusub ee SS21: New Edgy